Lisitra feno an'ny SQL Server Hadisoana sy olana eo amin'ny fisie MDF
Home Products DataNumen SQL Recovery Lisitry ny hadisoana feno
SQL Server Lesoka sy olana
Lisitr'ireo lesoka sy olana feno ao SQL Server MDF Database Files
Rehefa mampiasa Microsoft ianao SQL Server hametahana na hidiranao amin'ny rakitra tahiry MDF misy fotony, dia hahita hafatra diso isan-karazany ianao, izay mety somary manjavozavo aminao. Noho izany, eto izahay dia hiezaka ny hanao lisitra ny lesoka rehetra mety, voalahatra arakaraka ny fahita matetika. Isaky ny lesoka tsirairay dia hilazalazana ny soritr'aretina ananany izahay, hanazava ny antony marim-pototra ary hanome rakitra ohatra ary koa ny rakitra apetraky ny anay DataNumen SQL Recovery, mba hahafantaranao tsara azy ireo. Etsy ambany dia hampiasa ny 'xxx.MDF' izahay hanehoana ny maha-mpanao kolikoly anao SQL Server Anaran'ny rakitra MDF.
Miankina amin'ny SQL Server na hafatra diso CHECKDB, misy karazany telo ny lesoka izay hiteraka tsy fahombiazana:
Hadisoana amin'ny fizarana: Fantatray fa ny angona ao amin'ny rakitra MDF & NDF dia atokana ho pejy. Ary misy pejy manokana ampiasaina amin'ny fitantanana fizarana, toy izao:
Pejy GAM Tehirizo ny fampahalalana momba ny sari-tany (GAM) manerantany.
Pejy SGAM Fampahalalana mombamomba ny fizarana fizarana manerantany (SGAM) nozaraina.
Pejy IAM Fampahalalana momba ny sarintany fanondroana index (IAM).
Pejy PFS Tehirizo ny fampahalalana momba ny fizarana PFS.
Raha misy amin'ireo pejy natokana etsy ambony ireo manana lesoka, na ny angona tantanin'ireo pejy fizarana ireo dia tsy mifanaraka amin'ny mombamomba ny fizarana, dia SQL Server na CHECKDB no hanao tatitra lesoka fizarana.
Hadisoana tsy tapaka: Fa pejy izay ampiasaina hitahirizana angona, ao anatin'izany ireo pejin-drakitra sy pejy fanondroana, raha SQL Server na CHECKDB mahita tsy fitoviana eo amin'ny atin'ny pejy sy ny takelaka, dia hitatitra izy ireo lesoka tsy tapaka.
Lesoka hafa rehetra: Mety misy lesoka hafa tsy tafiditra amin'ireo sokajy roa etsy ambony.
xxxx.mdf dia tsy rakitra tahiry data voalohany. (Microsoft SQL Server, Hadisoana: 5171)
Ny lohatenin'ny rakitra 'xxxx.mdf' dia tsy lohatenin-drakitra rakitra database. Tsy marina ny fananana FILE SIZE. （Microsoft SQL Server, Hadisoana: 5172）
SQL Server nahatsikaritra lesoka I / O mifototra amin'ny lozisialy: checkum tsy marina
SQL Server nahita hadisoana I / O mifototra amin'ny lozisialy: pejy triatra
Diso ianao mamafa ny rakitra sasany na ny latabatra sasany ao anaty tahiry.
SQL Server manana fitaovana natsangana antsoina hoe DBCC, izay misy CHECKDB ary Azo zahana safidy izay afaka manampy amin'ny fanamboarana tahiry MDF maloto. Na izany aza, ho an'ireo rakitra tahiry MDB simba be, DBCC CHECKDB ary Azo zahana tsy hahomby koa.
Hadisoana tsy tapaka notaterin'ny CHECKDB:
Ny tsipika ao amin'ny sys.xxx dia tsy manana laharana mifanaraka amin'ny sys.xxx.
Hadisoana eo amin'ny latabatra: Haverina namboarina ny ID ID ##, ny index ID ##.
Ity index index an'ny latabatra rafitra ity dia tsy azo averina ampiasaina.
ID ID ##, index ID ##, ID fisarahana ##, fizarana ID unit ## (karazana Tsy fantatra), pejy ID (##: 560) dia misy ID pejy tsy marina ao amin'ny lohatenin'ny pejiny.
Hadisoana ny fizarana notaterin'ny CHECKDB:
Ny pejin'ny Map Allocation Index (IAM) dia tondroin'ny Next Pointer ny pejy IAM
Ny extent (##: ##) ao amin'ny angona ID ## dia voamarika atokana ao amin'ny GAM, saingy tsy nisy SGAM na IAM nanokana azy.
Ny lesoka hafa rehetra notaterin'ny CHECKDB:
Tsy nahomby: (- ####) Ny fanatanterahana ny fangatahana "DBCC CHECKDB (xxxx) WITH NO_INFOMSGS" dia tsy nahomby tamin'ity lesoka ity: "xxxx".
Ny lesoka I / O (pejy pejy ratsy) dia voamarika nandritra ny fotoana namakiana azy tamin'ny offset 0x ###### ao amin'ny rakitra 'xxxx.mdf'.
Ny rafitra dia tsy afaka nanetsika ampy ny angona data hananganana indray ny hazo
Fahaverezana data rehefa manamboatra amin'ny CHECKDB
Toa notapahin'ilay rafitra miasa ny rakitra.
Nandritra ny fanavaozana ny fisoratana anarana voasoratra ao amin'ny tahiry 'xxxx' dia nisy lesoka nitranga tao amin'ny ID record log.